WAR DEG DEG AH: Diyaarad ku dhacday gobalka Shabeelaha Hoose & Al- Shabaab oo Gacanta….. | Puntlandtimes.com	Wednesday, August 31st, 2016	Home
WAR DEG DEG AH: Diyaarad ku dhacday gobalka Shabeelaha Hoose & Al- Shabaab oo Gacanta…..
Jun 12, 2016 - jawaab	MARKA(PTIMES)- Wararka naga soo gaaraya gobalka Shabeelaha Hoose ayaa sheegaya in diyaarad nooca aan duuliyaha lahayna ay ku soo dhacday deegaanka Goobaale ee u dhaw magaalada Marka, sida ay sheegaaan warar hadda soo dhacaya.
Wararka ayaa xaqiijinaya in diyaaraddan ay gacanta ku dhigeen kooxda Al- Shabaab oo hadda gacanta ku haysa deegaankaas, waxayna warbaahintooda ka sheegteen in ay gacanta ku hayaan oo ay baaris ku hayaan.
Ilaa hadda cidna kama hadlin diyaaraddan aan duuliyaha laheyn, waxaana la xaqiijiyey in diyaaraddan ay ka duushay madaarka Diyaaraduhu ka duulaan ee Bali-doogle oo ay adeegsadaan inta badan ciidamada AMISOM, Dawladda Soomaaliya & Dawladdaha Reer galbeedka.
Diyaaraddan waxaa ku rakibnaa qalabka wax Basaasa, sida ay sheegayaan wararka la helayo, waxaana horey u dhacay diyaarado noocaan oo kale ay oo ay lahaayee dawladdaha taageera Soomaaliya & ciidamada AMISOM.
FILO GOOR DHAW FAAHFAAHINTA